बिल गेट्सको पढाइपछिको यात्रा ! – Khabar Silo
बिल गेट्सको पढाइपछिको यात्रा !
४० बिलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर उनको सम्पत्ति ८२ मिलियन डलर भएको थियो । सन् २०१७ को सुची हेर्ने हो भने पनि उनी विश्वकै धनी व्यक्तिको सुचीको पहिलो स्थानमा रहेका छन् । उनको सम्पत्ति ८५।६ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
जब उनी ३१ वर्षको थिए उनको नेटवर्थ १ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो ।माइक्रोसफ्ट रेभेन्यु८५।३ बिलियन अमेरिकी डलरघर र अन्य सम्पत्तिहरुजनडु २।०, वासिङटन१५४।२ मिलियन अमेरिकी डलररान्छो पासियाना, सान डियगो१८ मिलियन डलरविलिङटन फ्लोरिडा१३।५ मिलियन डलरआयरल्याण्डग्राण्ड बोग काय, बेलिज२५ मिलियन डलर
कारहरु१९८८ पोस्र्च ९५९ कप३,८०,००० अमेरिकी डलरपोस्र्च ९११ कारिया१,४९,७२० अमेरिकी डलरबमबार्डियर बिडी७०० ४० मिलियन डलर
बोइङ बिजनेश८० मिलियन डलरआर्ट एण्ड कलेक्शनहरुकोडेक्स लेसिस्टर, बुक अफ लियोनार्दो दा भिन्ची३०।८ मिलियन डलरलस्ट अन द ग्राण्ड ब्यांक्स३६ मिलियन डलरपोलो क्राउड ९१९१००२८ मिलियन डलरउनले गरिबी निवारण, स्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि उनले २८ बिलियन डलर दान गर्दै आइरहेका छन् ।
काठमाडौं – ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा एकै दिन ४२ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो समाचार तयार पार्दा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ४२ हजार ६१० जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या २९ लाख ८१ हजार ८ पुगेको छ । सोमबार बिहानसम्म १ लाख ३२ हजार ५५२ जनाको मृत्यु […]
कोरोना भाइरसको स्रोत खोज्दै डब्ल्युएचओ, चीनको वुहानमा विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्दै
काठमाडौं – संक्रमण देखिएको साढे ६ महिनापछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) कोरोना भाइरसको स्रोत पहिचानमा लागेको छ । कोरोनाको स्रोतबारे अध्ययन गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) २ जना विज्ञ चीनको वुहान गएका छन् । टोलीले भाइरसको स्रोत के हो भनेर पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्ने डब्ल्युएचओलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरस […]
अभिनेता सुशिलले पनि गरे देहत्याग
काठमाण्डौ – कन्नडा सिनेक्षेत्रका अभिनेताले देहत्याग गरेका छन् । सुशान्तको निधनको महिना दिन नपुग्दै अर्का अभिनेताले आफ्नो प्राण त्याग गरेका हुन् । कन्नडा अभिनेता सुशिल गोड्वाले मङगलवार साँझ आफ्नै घरमा प्राण त्यागेका हुन् । उनको निधनले कन्नडा टेलिभिजन र सिनेमा जगत नै शोकाकुल बनेका छन् । उस्ले किन यो बाटो रोज्यो भनेर खुलेको छैन । […]
रोहितको कप्तानी पारीमा नेपालद्वारा युएईलाई २८६ रनको लक्ष्य
अघोर बाबाले अंग्रेजीमा थर्काउदा बिदेशी समेत चकित परे,हेर्नेहरुको घुइचो